Habbaynta xogta gaarka ah - Finentry
FINENTRY waa adeeg dhijitaal ah oo lagu isticmaalo barowsarka, loogu talo galay si loo fududeeyo in loo safro Finlad oo la maareeyo baadhitaanka korono fayraska looga baahn doono gelida muddada safmarka korono fayraska.
Xog ururinta FINENTRY ee Adeega waa la isticmaali karaa si loo siiyo marin wata talooyinka la gaar yeelay oo ku saabsan haddii baadhitaanka korona fayraska loo baahan yahay iyaddoo ku salaysan duruufaha qofka gelaya iyo tilmaamaha la oggolaaday ee ansaxa ah, iyo haddii baadhitaanka loo baahan yahay, imis awakhti iyo marka uu qofka galaya u baahan yahay inuu iyaga soo bandhigo.
Haddii ay lama huraan tahay, qofka geliya waxa uu qabsan saree ballanka iskaa u adeega gudaha cusbitaalka degmadda hirgeliyay adeega FINENTRY – ama wax auu sameeyaa muunada codsiga mar hore ee lagu qaadi doono goobta laga gudbayo xadka, midkay ahaataba looma baahan doono in lagalo saf xaga goobta macluumaadka caafimaadka goobta xadka laga gudbayo.
Raad raaca caabuqu waxa uu ku salaysan yahay Xeerka Cudurada Lakala qaado, taas oo Qaybta 39 ay oggolaato ururinta iyo habbaynta macluumaadka dadka qaaday ama looga shakisan yahay caabuqa. Macluumaadku waa qaybta diiwaanka xaalad-xaalada ah ee cusbitaalka degmadda ka masuulka ah raad raaca caabyqa.
Diiwaanka xaalad-xaalada ah waxaa maamula cusbitaalka degmadda halka degmadda qofka gelaya ee imaanshaha uu ku yaalo ama halka qofka geliyaa uu joogo muddo wakhti ah.
Macluumaadka diiwaanka xaalad-xaalada ah waxaa laga soo wareejiyaa cusbitaalka degmadda ilaa mid kale si toos iyaddoo ku salaysan dhaqdhaqaaqa qofka gelaya ee u dhexeeeya degmooyinka.
Macluumaadka ku saabsan diiwaanada bukaanak waxaa laga heli karaa websaydka maamulada xog kasta si waafaqsan sharciga ilaalinta xogta. Si dib loogu eego macluumaadkaaga,k fadlan la xidhiidha cusbitaalka degmadda habbeeyay baadhitaanka korona fayraska.
Cusbitaalka Degmadda Koonfurta Karelia
Cusbitaalka Degmadda Koonfurta Ostrobothnia
Cusbitaalka Degmadda Koonfurta Savonia
Cusbitaalka Degmadda Helsinki iyo Uusimaa
Cusbitaalka Degmadda Bariga Savonia
Cusbitaalka Degmadda Koonfurta Kainuu
Cusbitaalka Degmadda Tavastia Properi
Cusbitaalka Degmadda Badhtamaha Ostrobothnia
Cusbitaalka Degmadda Badhtamaha Finland
Cusbitaalka Degmadda Kymenlaakso (pdf)
Cusbitaalka Degmadda Lapland
Cusbitaalka Degmadda Länsi-Pohja
Cusbitaalka Degmadda Pirkanmaa
Cusbitaalka Degmadda Waqooyiga Karelia
Cusbitaalka Degmadda Waqooyiga Ostrobothnia
Cusbitaalka Degmadda Päijänne Tavastia
Cusbitaalka Degmadda Satakunta
Cusbitaalka Degmadda Vaasa
Cusbitaalka Degmadda Koonfur Galbeed Finland